ကိတ် Middleton မိသားစုအသက်တာ၏အစအဦးမှာပါဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်နှင့်အတူသူ၏ဆကျဆံရေးနှင့်သူမ၏အကူအညီနဲ့အကွောငျးပွော
အားလုံးဗြိတိန်ဧကရာဇ်၏အင်တာဗျူးရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒုက္ခ regularity နှင့်အတူမီဒီယာထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှနေသားတကျဖြစ်လာကြပါပြီ။ သို့သော်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိသည်သောတာဝန်များကိုသို့မဟုတ်ကိစ္စများဆက်စပ်။ မနေ့ကဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုကိုပရိတ်သတ်တွေသာယာသောအံ့အားသင့်: ကိတ် Middleton မင်းသားဝီလျံရဲ့ဇနီး, သူမအိမ်မှာဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်၏အပြုအမူဖော်ပြထားသည့်အတွက်သေးငယ်တဲ့အင်တာဗျူးကိုပေး၏။
ဘုရင်မကြီး Charlotte ရဲ့မွေးဖွားအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့
ကိတ်နဲ့သူ့ရဲ့အင်တာဗျူး Charlotte ၏မွေးဖွားအကြောင်းကိုပြောဆိုသောဟုစတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အတိုင်းမိန်းကလေးမွေးဖွားခဲ့သောအခါဧလိရှဗက် II ကိုအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤတွင်စကားတော်သည်ဤ Middleton အကြောင်းကိုဆိုသည်:
သူတို့က ultrasound ပေါ်မှာငါ့ကိုပြောပြတဲ့အခါ "ကျနော်တို့ဝီလျံ၏သမီး, ပျြောရှငျ, ငါတို့ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်မတို့အိမ်မှာမသာဖြစ်ရပါမည်။ သူမအမြဲသူမကကျွန်မတို့မိသားစုထဲမှာတစ်ဦးကလေးမလေးရှိကွောငျးကိုအလွန်ကြီးကပြောသည်အတိုင်းဤသတင်းအများစုဟာ, သူမရဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်လေးစား။ သူမသည် Charlotte နှင့်အတူမေတ္တာ၌ madly ရဲ့အမြဲတမ်းဘယ်လိုသူမ၏ခံစားချက်ဘယ်လိုကြီးထွားလာအံ့ဩကြ၏။ ငါမိဖုရားဂျော့သို့မဟုတ်သူ၏အခြားအမြေးကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါကြောင်းပြောပေမယ့်တစ်ဦး, အထူးနွေးနှင့်ညိုလေးစားသဘောထားကသူမရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးလို့မရပါဘူး။ အဲလစ်ဇဘက် II ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ, သူမအမြဲသားသမီးများ၏ပညာရေးအတွက်၎င်း၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ထို့အပြင်သူမ၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာအမြဲသူတို့မမြင်နိုင်ကြဘူးနေချိန်မှာသူမကသူတို့၏ခန်းထဲမှာအရွက်ရသောသူ၏သမီးနှင့်သား, အဘို့လက်ဆောင်တွေရှိသည်။ ဒါစကားလုံးများကိုဖော်ပြမပေးနိုငျကွောငျးကိုထိသည်။ ဘာမှဒါပေမဲ့ဂျော့ခ်ျနှင့် Charlotte များအတွက်သူမ၏လက်နက်ဖြစ်၏ချစ်ရာရောက်၏ "- ငါကဒီအပြုအမူအဲလိဇဘက်ထင်ပါတယ်။
ကိတ် Middleton နှင့်ဘုရင်မအဲလိဇဘက်
မင်းသမီး Charlotte ကင်းဘရစ်
Middleton သူမ၏အသက်တာ၌မင်းသားဝီလျံနဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက်အများကြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အများစုမှာကိတ်ယခုသူမကင်းဘရစ်၏ Duchess ၏ status အတွက်လုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းတာဝန်များကိုထိတျလနျ့။ Middleton အခြေချရန်ပင်လောကဝတ်သင်ခန်းစာတွေကို ယူ. , ဒါပေမယ့်အများဆုံးအထောက်အပံ့နှင့်အကူအညီကိုသူမဧလိရှဗက် II ကိုခဲ့ရသည်။ ဤတွင်အဘယျသို့စကားလုံးများကိုသူ၏အသက်တာ Keith တဦးကာလပြန်ပြောပြ:
"ငါ့ကိုသည်ကအလွန်ခက်ခဲအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဘုရင်မကြီးအမြဲတမ်းကယ်ဆယ်ရေးမှရောက်လေပြီ။ ငါအမှားတွေကိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့အပေါ်မှာရှောင်ရှားရန်လုပ်ဖို့လုပ်ဘယ်မှာသူမကနူးညံ့သောငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးလွတ်လပ်သောခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မဘယ်တော့မှမေ့ရလိမ့်မည်။ ဒါဟာ Leicester မှခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းမီ, ငါသာဝီလျံနှင့်အတူအများပြည်သူ၌ထငျရှားသောကွောငျ့ထိုနေ့ရက်ကိုငါကအရမ်းနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ကတစ်ဦးတည်းအများပြည်သူ event မှာပေါ်လာဖို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနားလည်သူတစ်ဦးတည်းသာ - ငါအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကဒီခရီးစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်နေနှင့်ဘုရင်မကြီးဖြစ်၏။ အဆိုပါနေ့ရက်တွင်ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်ခရီးစဉ်ကိုပိုမိုမကြာခဏပုံမှန်အတိုင်းထက် Leicester ဖို့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ သူမသည်ကျွန်မကိုအပေါ်သူ၏အချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့။ ဒါဟာမိဖုရားကနေအမှန်တကယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုခဲ့ပါတယ်။ "
မင်းသားဂျော့ခ်ျနဲ့ William, ကိတ် Middleton, Queen Elizabeth II
ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II နှင့်ကိတ် Middleton
Mila Kuni မှာ Ashton Kutcher အနာဂတ်မှာ၏ "ဘဲလေး" ကိုသူ၏သမီးများကို ပြင်ဆင်.
Pamela Anderson တို့နှင့် Sergei Ivanov
လီနာ Headey အဆိုပါ Edit ကိုအတူပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအင်တာဗျူးပေးတော်မူပြီ
အဘယ်ကြောင့်နမ်း Christoph Waltz နှင့်အလက်ဇန်းဒါး Skarsgard က "Tarzan ထံမှ excised ခဲ့ကြသည်။ ဒဏ္ဍာရီ "?
Benedict Cumberbatch နီးပါးဒမြသတ်ကြောင်းသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်!
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအိန်ဂျလီနာဂျိုလီ Brad Pitt နှင့်အတူကွာရှင်းအပေါ် commented
မင်းသမီး Emma Stone သူမတစ်ဦးအမည်ပြောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေဘယ်လောက်ပြောသည်
လီနာ Dunham အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများ၏သားကောင်ဘပြောသော!
ဣတ္နှင့် sassy Elle Fanning အသစ်တစ်ခုကြော်ငြာအမှတ်တံဆိပ် L'Oreal ပဲရစ်ကြယ်ပွင့်
Esophageal အူကျ - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
အခြားအိုးမှအစားထိုး dratsenu အဖြစ်?
Convection အပူပေးစက်, စွမ်းအင်ချွေတာအိမ်က
အတွင်းပိုင်းထဲမှာ, aqua အရောင်
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု
Granola - တစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည် crunchy ရယူထားသောများအတွက်အရသာစာရွက်
ခံတွင်း၌ငန်အရသာ - အကြောင်းရင်းများ
အဝတ် 2014 polusolntse
စတူဒီယိုထဲမှာနယူးဓာတ်ပုံ session တစ်ခု - စတူဒီယိုကိုဖမ်းယူဖို့အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များနှင့်ရုပ်ပုံများကို